नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै, प्रधानमन्त्रीले किन ढिला बधाइ दिए ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalनेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै, प्रधानमन्त्रीले किन ढिला बधाइ दिए ?
Home खेलकुद नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै, प्रधानमन्त्रीले किन ढिला बधाइ दिए ?
नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै, प्रधानमन्त्रीले किन ढिला बधाइ दिए ?
काठमाडौं : पहिलो पटक एक दिवसीय र टी–२० सिरिज क्रिकेट जितेर नेपाली टिम सोमबार दिउँसो स्वदेश फर्कदै छ । युएईमा भएको एक दिवसीय र टी–२० मा सिरिज जितेर नेपाल उपाधिसहित दिउँसो आउन लागेको हो ।
नेपाली टिमका म्यानेजर रमन शिवाकोटीले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली टोली फ्लाई दुबईमार्फत दिउँसो ३ः२० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने छ ।
नेपाली टोलीलाई भब्य स्वागत गर्ने तयारी बनाइएको छ ।
बधाइको ओइरो, प्रधानमन्त्री कहाँनेर चुके ?
नेपालले युएईलाई उसकै भूमिमा एक दिवसीय र टी–२० मा समान २–१ ले हराएर सिरिज जित्यो । नेपालले अहिलेसम्म टी–२० र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सिरिज जितेको थिएन ।
यो सफलतापछि बधाई दिनेको ओइरो लाग्यो । विभिन्न घटनाहरु ढिला थाहा पाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बधाई दिइन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि बधाइ दिए । त्यसैगरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसले पनि बधाई दियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ढिला गरी बधाइ दिए । यसअघि उनी बधाइ दिन र टिमलाई बालुवाटार बोलाउनमा छिट्टो देखिन्थे ।
यसपटक त उनलाई नेपालले इतिहास रचेको पत्तो समय भएन जस्तै भयो । जताततैबाट आएको बधाईले उनलाई जवरजस्ती ट्वीट गर्न वाध्य पारेजस्तो गरी आइतबार भएको टी–२० को तेस्रो खेलमा जितेको जितको मात्र प्रसंग उठाएर बधाई दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘तेस्रो टी–२० खेलमा नेपालले युएईसँग १४ रनले विजय हासिल गरेको थाहा पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ । नेपाली क्रीकेटका लागि यो अर्को ठूलो सफलता हो। नेपाली क्रीकेट टिमका सम्पूर्ण सदस्यलाई हार्दिक वधाई !’
यसरी थाहै नपाइनपाई उनले कहाँ कसरी बोले, के के भने भन्ने कुराको लेखाजोखा त हुने नै छ । उनले संसदमा आर्थिक आँकडा प्रस्तुत गर्दा पनि हचुवा र झुठो आँकडा प्रस्तुत गरेको भनी चर्को आलोचना भएको थियो ।
चिकित्सकले आराम गर्नमा बढी जोड दिने गरे पनि उनी सकभर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नका लागि व्यस्त हुन्छन् । उनको भनाइ भन्दा पनि ‘रिफ्रेस’ हुन प्रवचन सुन्न जानेहरु धेरै भएको बुझिन्छ ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न जसरी अन्य विषयमा अन्टसन्ट बोलेर विवादमा आउँछन् क्रिकेटमा किन ? ट्वीटरमा बधाइ नै दिनपर्छ भन्ने त थिएन । बधाई दिने तैपनि आधा बढाइ । किन प्रधानमन्त्री ज्यू ? कतै यो पनि ‘रिफ्रेस’ का लागि त हैन ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आज सरकारविरुद्ध देशभर प्रर्दशन गर्ने